မြန်မာယူ ၂၃ အသင်း ပရိတ်သတ်စိတ်ကျေနပ်အောင် စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မလား
မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းအတွက် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရစေမယ့် ၂၀၁၈ အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ
15 Aug 2018 . 2:25 PM
မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေဟာ ရှေ့မှာစောင့်ကြိုနေကြပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီနေ့မှာ မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ့် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဆင့်ပွဲအဖြစ် မြောက်ကိုရီးယားယူ ၂၃ အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ကစားသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ယူ ၂၃ အသင်းဟာ အုပ်စုအဆင့်မှာ မြောက်ကိုရီးယားယူ ၂၃ ၊ အီရန်ယူ ၂၃ ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျယူ ၂၃ အသင်းတွေနဲ့ ကစားသွားရမှာပါ။ မြန်မာယူ ၂၃အသင်းဟာ အုပ်စုကျပ်ထဲရောက်နေလို့ ခက်ခဲဖို့ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းရဲ့လူစာရင်းကိုကြည့်ရင် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကောင်းမွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းဟာ လူကြီး၊လူငယ် ရောစပ်ထားပြီး တက်သစ်စလူငယ်ကစားသမားတချို့ပါ ပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျော်ဇင်ထက် ၊ ဇော်မင်းထွန်း တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာ မြန်မာယူ ၂၃အသင်းအတွက် အထောက်အပံကောင်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး အောင်သူ ၊ လှိုင်းဘိုဘို ၊ ထိုက်ထိုက်အောင် ၊ မောင်မောင်စိုး ၊ မောင်မောင်လွင် ၊ နန္ဒကျော် ၊ စည်သူအောင် ၊ ရန်နိုင်ဦး တို့အစုအဖွဲ့ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေကို အခက်တွေ့စေမလားဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းမှာ ၂၀၁၅ ယူ ၂၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတချို့လည်းပါဝင်လာတာကြောင့် အသင်းရဲ့အနေအထားဟာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းဟာ နည်းပြသစ် အန်တိုနီဟေး လက်ထက်မှာကစားပုံတိုးတက်မှုလေးတွေရှိလာတာကြောင့် မျှော်လင့်ခွင့်ရှိနေတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းမှာ အဓိကစောင့်ကြည့်သွားရမယ့်သူကတော့ တိုက်စစ်မှုးအောင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခြေစွမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်တဲ့ အောင်သူ ဟာ ထိုင်းကလပ် Police Tero အသင်းမှာ အငှားနဲ့သွားရောက်ကစားနေသူဖြစ်ပြီး ခြေစွမ်းပိုင်းပိုမိုတိုးတက်မှုတွေရှိလာသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောင်သူဟာ မြန်မာဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေကျေနပ်အောင် အောင်သူအနေနဲ့လုပ်ဆောင်ပြသွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မြန်မာအသင်းဟာ အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ အစဉ်အလာရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ ကြေးတံဆိပ်ဆု ၊ ၁၉၆၆ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေမှာ ရွှေ့တံဆိပ်ဆုတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းအနေနဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်လိုရလဒ်ပဲရရှိပါစေ အာရှထိပ်သီးအသင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်လို့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိမှာကတော့ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာရရှိလာမယ့် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို ဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာအသုံးချနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ ….
မြန်မာယူ ၂၃ အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်များ
မြန်မာ ယူ ၂၃ နှင့် မြောက်ကိုရီးယား ယူ ၂၃ (ညနေ ၆း၃၀)
မြန်မာ ယူ ၂၃ နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ ယူ ၂၃ (ညနေ ၆း၃၀)
မြန်မာ ယူ ၂၃ နှင့် အီရန် ယူ ၂၃ (ညနေ ၃း၃၀)
အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ အကြိမ်အများဆုံးဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ အသင်းများ
South Korea4(1970, 1978, 1986, 2014)
Iran4(1974, 1990, 1998, 2002)
India2(1951, 1962)
Myanmar2(1966, 1970)
North Korea 1 (1978)
Japan 1 (2010)
Iraq 1 (1982)
Qatar 1 (2006)
Photo: globalnewlightofmyanmar.com , Sporting News
မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးအတှကျ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှရေစမေယျ့ ၂၀၁၈ အာရှအားကစားပွိုငျပှဲ
မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးအတှကျ စိနျချေါမှုတှဟော ရှမှေ့ာစောငျ့ကွိုနကွေပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီနမှေ့ာ မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးဟာ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈလကျခံကငျြးပမယျ့ အာရှအားကစားပွိုငျပှဲ အုပျစုအဆငျ့ပှဲအဖွဈ မွောကျကိုရီးယားယူ ၂၃ အသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျကစားသှားရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ မွနျမာ ယူ ၂၃ အသငျးဟာ အုပျစုအဆငျ့မှာ မွောကျကိုရီးယားယူ ၂၃ ၊ အီရနျယူ ၂၃ ၊ ဆျောဒီအာရဗေယြူ ၂၃ အသငျးတှနေဲ့ ကစားသှားရမှာပါ။ မွနျမာယူ ၂၃အသငျးဟာ အုပျစုကပျြထဲရောကျနလေို့ ခကျခဲဖို့ရှိပါတယျ။
လကျရှိ မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးရဲ့လူစာရငျးကိုကွညျ့ရငျ အတိုငျးအတာတဈခုထိကောငျးမှနျနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးဟာ လူကွီး၊လူငယျ ရောစပျထားပွီး တကျသဈစလူငယျကစားသမားတခြို့ပါ ပါဝငျလာတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ကြျောဇငျထကျ ၊ ဇျောမငျးထှနျး တို့ရဲ့အတှအေ့ကွုံတှဟော မွနျမာယူ ၂၃အသငျးအတှကျ အထောကျအပံကောငျးတှဖွေဈလာမှာဖွဈပွီး အောငျသူ ၊ လှိုငျးဘိုဘို ၊ ထိုကျထိုကျအောငျ ၊ မောငျမောငျစိုး ၊ မောငျမောငျလှငျ ၊ နန်ဒကြျော ၊ စညျသူအောငျ ၊ ရနျနိုငျဦး တို့အစုအဖှဲ့ဟာ ပွိုငျဘကျတှကေို အခကျတှစေ့မေလားဆိုတာကလညျး စိတျဝငျစားစရာပါ။မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးမှာ ၂၀၁၅ ယူ ၂၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲဝငျကစားသမားတခြို့လညျးပါဝငျလာတာကွောငျ့ အသငျးရဲ့အနအေထားဟာ စိတျဝငျစားစရာတှနေဲ့ ပွညျ့နပေါတယျ။ မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးဟာ နညျးပွသဈ အနျတိုနီဟေး လကျထကျမှာကစားပုံတိုးတကျမှုလေးတှရှေိလာတာကွောငျ့ မြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိနတောကတော့ အမှနျပါပဲ။ မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးမှာ အဓိကစောငျ့ကွညျ့သှားရမယျ့သူကတော့ တိုကျစဈမှုးအောငျသူပဲဖွဈပါတယျ။ ခွစှေမျးပိုငျးဆိုငျရာ ကောငျးမှနျတဲ့ အောငျသူ ဟာ ထိုငျးကလပျ Police Tero အသငျးမှာ အငှားနဲ့သှားရောကျကစားနသေူဖွဈပွီး ခွစှေမျးပိုငျးပိုမိုတိုးတကျမှုတှရှေိလာသူပဲဖွဈပါတယျ။ အောငျသူဟာ မွနျမာဘောလုံးပရိတျသတျတှအေတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြရောငျခွညျတဈခုဖွဈပွီး ပရိတျသတျတှကေနြေပျအောငျ အောငျသူအနနေဲ့လုပျဆောငျပွသှားနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
မွနျမာအသငျးဟာ အာရှအားကစားပွိုငျပှဲမှာ အစဉျအလာရှိတဲ့အသငျးဖွဈပွီး ၁၉၅၄ ခုနှဈမှာ ကွေးတံဆိပျဆု ၊ ၁၉၆၆ ခုနှဈနဲ့ ၁၉၇၀ ခုနှဈတှမှော ရှတေံ့ဆိပျဆုတှကေို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးအနနေဲ့ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ဘယျလိုရလဒျပဲရရှိပါစေ အာရှထိပျသီးအသငျးတှနေဲ့ရငျဆိုငျရမှာဖွဈလို့ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှရေရှိမှာကတော့ အသအေခြာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီပွိုငျပှဲမှာရရှိလာမယျ့ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှကေို ဒသေတှငျးပွိုငျပှဲတှမှောအသုံးခနြိုငျမလားဆိုတာကိုတော့ ….
မွနျမာယူ ၂၃ အသငျးရဲ့ပှဲစဉျမြား
မွနျမာ ယူ ၂၃ နှငျ့ မွောကျကိုရီးယား ယူ ၂၃ (ညနေ ၆း၃၀)
မွနျမာ ယူ ၂၃ နှငျ့ ဆျောဒီအာရဗြေ ယူ ၂၃ (ညနေ ၆း၃၀)
မွနျမာ ယူ ၂၃ နှငျ့ အီရနျ ယူ ၂၃ (ညနေ ၃း၃၀)
အာရှအားကစားပွိုငျပှဲမှာ အကွိမျအမြားဆုံးဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ အသငျးမြား